Kpọọ oku ekwentị site na Organic na Pakwụ Searchgwọ | Martech Zone
Anyị nwere onye ahịa hụrụ ụgbọala ọzọ n'anya oku ekwentị ka azụmahịa ha karịa usoro ọ bụla ọzọ. Dị ka ndị ahịa ha, anyị chọrọ ijide n'aka na atụmatụ anyị na-arụ ọrụ nke ọma, yabụ anyị kwesịrị itinye ụfọdụ usoro akọwapụtara iji ghọta ebe oku ekwentị na-abịa.
Ndị ahịa abanyela Ọnụ ọgụgụ na mkpọsa ndị gara aga na, mgbe anyị tinyechara minit ole na ole n'elu ikpo okwu anyị maara na ọ nwere ike ịnabata mkpa anyị!
Ndepụta akwụ ụgwọ ekwentị ekwentị ọchụchọ
Ckingchọta oku ekwentị akwụ ụgwọ na-adị mfe ebe ọ bụ na ịnwere ike bipụta nọmba ekwentị ọ bụla ịchọrọ. Tinye nọmba ekwentị na HostedNumbers ma ị dịla njikere ịga… ka ị bụ? N'ime Ubon, ha na-akpọ oku nke oma nchịkọta iji mee ka ị mata ebe inbound ekwentị oku na-abịa.
Ọnụ ọgụgụ na-enyekwa njikọ nke nchịkọta Google Analytics nke ọma. Naanị gaa Ọrụ> Nhọrọ nhazi ị ga-ahụ Njikọ Nchịkọta Weebụ.
n'ime Njikọ Nchịkọta Weebụ, anyị nwere ike ịtọlite ​​URL dị egwu na ibe anyị gbochiri engines ọchụchọ ka ọ ghara ịgha. Ikike ndị ahụ na-enye gị ohere iji eriri dị ike nke nwere ike dochie ya mere anyị wuru mkpọsa URL nke ga-ewepụta isi iyi dị ka ọchụchọ, ndị na-ajụ ajụ dị ka oku, wee kpọọ mkpọsa ahụ ka nọmba ekwentị kpọrọ.
Ugbu a, anyị ga-enwe ike soro akwụ ụgwọ ọchụchọ ekwentị oku n'ime Google Analytics. Ọzọkwa, o yikarịrị ka anyị ga-achọpụta nsụgharị ntọghata maka ibe dị n'ime a pụrụ iche yana ikekwe dashboard na-enyocha oku.
Ndepụta Ekwentị Organic Search ekwentị
Iji HostedNumbers, anyị nwere ike itinye nọmba ekwentị maka ọchụchọ ahịhịa wee soro ya n'ime nchịkọta Google site na iji koodu dị n'elu. Agbanyeghị, ịdebe nyocha ọchụchọ dị ntakịrị karịa n'ihi na anyị kwesịrị ịgbanwee ọnụọgụ nọmba ekwentị ma ọ bụrụ na onye ọrụ abanye na saịtị ahụ site na nyocha ọchụchọ.
Iji mee nke a, anyị mere nke a site na-ekwusara ndị hyperlinked nọmba ekwentị na saịtị ahụ na-adịru na mkpado na otu klas:
Kpọọ Anyị Ugbu a: (19876543210) 987-654
Na n'ime ala nke ibe tupu njedebe ahụ, anyị na-ebu jQuery nke na-egosipụta onye na-ezo aka wee gbanwee nọmba ekwentị ma ọ bụrụ na ọ bụ igwe nyocha na-eziga okporo ụzọ:
Ugbu a, ọ bụrụ na mmadụ si na nchọta ihe nchọta pịa nsonaazụ wee rute na ibe ọ bụla n'ime saịtị ahụ, a ga-egosipụta nọmba ekwentị mkpọsa. Ozugbo onye ọbịa ahụ kpọrọ nọmba ekwentị ahụ, Google Analytics ga-ejide ya n'ime mkpọsa!
Tags: Analyticsoku na-esochiGoogle Analyticsndị ọbịaekwentị oku nsusooku na-aga